Imisebenzi yobuciko e-Pedi ihlanganisa ubumba, umdwebo wendlu, ukukhiqiza izinkuni (ikakhulukazi okwenza izigubhu), i-metalsmithing kanye ne-beadwork. Umculo wendabuko (mmino wa setso) unenani eliyisithupha-note, eladlalwa ngaphambili kulelo thuluzi elixotshiwe (dipela). Namuhla abaculi basebenzisa izinsimbi ezifana nehabhu lomJuda kanye ne-German autoharp (harepa), okuye kwabhekwa njengePedi ngokuvamile.
Mhlawumbe eyaziwa kakhulu yi-dance ye-kiba, eyayisetshenziswa ezindaweni ezisemaphandleni kodwa manje isitayela sokufuduka. Inguqulo yamadoda inesidlali sabathengi, ngasinye sinombhobho wokugcina ophazamisekile we-aluminium we-pitch (naka), okhiqiza izingoma ezihlabelayo ngezimiso ezicebile. Amadoda agqoka izikhumba (ukubuyela emuva ekuzibandakanyeni kwePedi ne-Allies ku-World War II) nge-regalia yendabuko.
Inguqulo yabesifazane ihlanganisa izingoma (i-dikosa) lapho abantu baqondisa khona isosha esidala. Ukucula nokudansa i-kiba ingenye yezikhathi ezimbalwa lapho abesifazane begqoke izingubo ezibukhali ze-kgarebe, okuqala ukugqoka emva kokuqala. Bobabili abesilisa nabesifazane basuke behambisana nezigubhu (meropa), okwenzelwe ama-drums kanye nobisi-urns.